ल्याब कलर स्पेस के हो? र तपाईलाई यसको बारेमा के थाहा हुनुपर्छ? - Print Peppermint
जनवरी 10, 2022 | रंग, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, Photoshop
तपाईं RGB र CMYK सँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ। तर प्रयोगशाला रंग ठाउँ के हो? चाहे तपाई ग्राफिक र कलर गीक होस् वा सामान्य मानिस होस्, हामीले यो प्रश्नको सरल जवाफ दिएका छौं। जो कोहीले बुझ्न सक्छ। यद्यपि यसमा केही संख्या र गणितीय जटिलताहरू छन्, हामी आज त्यहाँ जाँदै छैनौं। हाम्रो मुख्य फोकस तपाईलाई प्रयोगशाला रङ स्पेसको आधारभूत विचार दिनु हो।
त्यसैले तल स्क्रोल गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् हामीसँग तपाईंको लागि के छ।
प्रयोगशाला रंग ठाउँ के हो?
ल्याब रङ स्पेसले हामीलाई डिजिटल संसारमा रङहरू निर्दिष्ट गर्न र मात्रा निर्धारण गर्ने तरिका प्रदान गर्दछ जुन हाम्रा उपकरणहरूले बुझ्न सकिन्छ। यो RGB र CMYK जस्ता कुनै पनि रङ स्पेसको सामान्य प्रकार्य हो।
ल्याब रङलाई बाँकी भन्दा फरक बनाउने कुरा यो हो कि यसको रंग स्पेक्ट्रम धेरै विशाल छ। यसको मतलब यसले मानव आँखाद्वारा छुट्याउन सकिने रङहरूको धेरै नजिकको छायाहरू छुट्याउन सक्छ। तर यो व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छैन र मानक होइन। यद्यपि, यसमा अझै केही महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामी पछि छलफल गर्नेछौं।
कसरी प्रयोगशाला रङ स्पेसले रङहरू निर्दिष्ट गर्दछ:
L, a, रbले3प्यारामिटर वा अक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन यस प्रविधिले रङहरू अलग गर्न प्रयोग गर्दछ। यी3प्यारामिटरहरूमा आधारित (जसको बारेमा हामी चाँडै कुरा गर्नेछौं) सफ्टवेयरले त्यो रंगको लागि नम्बर उत्पन्न गर्दछ। प्रत्येक छायाको एक विशिष्ट संख्या हुन्छ र यसरी तपाईको उपकरणले विभिन्न रंगहरू बुझ्न सक्छ। कुनै पनि फरक रंगको एउटै नम्बर हुन सक्दैन।
प्रयोगशाला रंग स्पेस को3अक्ष:
L हल्कापनको लागि हो। यो0देखि 100 सम्म जान्छ
a रातो देखि हरियो हुन्छ। नकारात्मक अक्ष हरियो र सकारात्मक रातो छ।
b पहेंलोबाट निलोमा जान्छ। नकारात्मक पक्षमा नीलो र सकारात्मक पक्षमा पहेँलो हुन्छ।
यसलाई गहिराइमा बुझौं। लाइटनेसले चित्रमा कालो र खैरो बीचको भिन्नता देखाउँछ।aरbक्रोमेटिक छन्, तिनीहरूले प्रत्येक तत्वलाई तिनीहरूको सम्बन्धित रंगहरूको विपरीत देखाउँछन्। उदाहरण को लागी पहेंलो वा नीलो एक विशिष्ट तत्व हो। यसले तपाइँलाई हेर्न मद्दत गर्दछ कि एक विशेष तत्व रातो पक्ष वा हरियो तर्फ बढी छ।
यदि तपाईंले व्यक्तिगत च्यानलहरूमा चित्र देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले त्यो अक्ष रङहरूको सन्दर्भमा मात्र त्यो तस्वीर देख्नुहुनेछ। यो किनभने अन्तिम चित्र सबै3संयुक्त को परिणाम हो।
त्यसैले जहाँ तपाईं अक्षमा जानुहुन्छ, तस्विर तदनुसार परिवर्तन हुनेछ। यो धेरै राम्रो छ यदि तपाईं जानुहोस् र यसलाई Photoshop मा प्रयास गर्नुहोस्। यसले सबै कुरा धेरै स्पष्ट पार्नेछ।
अब, ल्याब कलर स्पेस प्रयोग गर्दा के फाइदाहरू छन्? यहाँ हामीले २ मुख्य फाइदाहरू छलफल गरेका छौं।
यो उपकरण स्वतन्त्र छ र यसैले सही रंग दिन्छ:
RGB र CMYK उपकरण निर्भर छन् तर प्रयोगशाला रंग ठाउँ होइन। यो बुझौं।
यदि तपाइँ RGB मा छवि छाप्नुहुन्छ भने रङहरू अलि फरक हुन सक्ने सम्भावना छ। यो तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको मसी, तपाईंले मुद्रण गरिरहनुभएको सतहको बनावट, र मुद्रण प्रक्रियामा रहेका अन्य धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। यो किनभने RBG ले यस्तो काम गर्छ।
प्रत्येक रंग रातो, नीलो र हरियो को केहि प्रतिशत को मिश्रण हो। र प्रत्येक मसीको समान मात्रा मुद्रण प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ। त्यसोभए बनावटले धेरै असर गर्छ विशेष गरी यदि तपाइँ कागज भन्दा अरू केहिमा मुद्रण गर्दै हुनुहुन्छ। यो उपकरण निर्भरता के हो।
ल्याब कलर स्पेसमा प्रत्येक रङको एक विशिष्ट संख्या हुन्छ। यन्त्रले कम्पोनेन्ट रङहरूको मात्रा अनुसार छाप्नुको सट्टा त्यो नम्बर रङ प्रिन्ट गर्दछ। त्यसोभए तपाईले प्रिन्ट गरिरहनुभएको बनावटको बावजुद, ल्याब रङ स्पेसले तपाईलाई उही रङ दिनेछ।
यो विशाल छ:
ल्याब रङ स्पेसमा हरेक रङको हरेक छाया हुन्छ जुन मानिसले देख्न सक्छ र देख्न सक्दैन। हो, तपाईंले सहि सुन्नुभयो। र यसले यसलाई अन्य रङ स्पेसहरू भन्दा फरक बनाउँछ।
यदि तपाईले विभिन्न रङ स्पेसको रङ स्पेस क्षेत्र हेर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि प्रयोगशालामा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र छ। यसको अर्थ ल्याब कलर स्पेसको बेल्ट मुनि रङहरूको थप दायरा छ।
प्रयोगशाला रंग ठाउँ के को लागी प्रयोग गरिन्छ?
ल्याब कलर स्पेस प्रायः प्रयोग गरिन्छ जब हामीले प्रिन्टलाई डिजिटल फारममा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ वा जब हामीले टी-शर्ट, मग, प्लास्टिक र अन्य अनियमित सामानहरूमा छाप्नु पर्छ। यो किनभने हामी रङहरू जताततै एकरूप हुन चाहन्छौं र प्रयोगशाला रङ स्पेस यस उद्देश्यको लागि सबैभन्दा राम्रो रंग ठाउँ हो।
ल्याब रङ स्पेसको रोचक प्रयोग: फोटोशपले ल्याब कलर स्पेसलाई रूपान्तरणका लागि मध्यवर्ती प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्दछ। उदाहरण को लागी, जब तपाइँ RGB बाट CMYK मा वा यसको विपरित छवि रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, यो पहिले ल्याब रङमा रूपान्तरण हुन्छ त्यसपछि इच्छित रङ स्पेसमा।
फोटोशपमा प्रयोगशाला रङ स्पेस कसरी पहुँच गर्ने:
यो एक धेरै सरल2चरण प्रक्रिया हो।
प्रयोगशालामा पूर्वनिर्धारित रंग ठाउँ परिवर्तन गर्नुहोस्:
पहिलो चरण प्रयोगशाला रंग ठाउँ चयन गर्न हो। यसका लागि तल उल्लेखित सरल चरणहरू पालना गर्नुहोस्,
Photoshop मा कुनै पनि छवि खोल्नुहोस्।
तपाईंको स्क्रिनको शीर्षमा छवि विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा सानो आयताकार विन्डो खोलिनेछ।
त्यो विन्डोबाट मोड चयन गर्नुहोस्।
अब अर्को विन्डोमा प्रयोगशाला रङ स्पेसको लागि जानुहोस् र तपाईंले पहिलो चरण पूरा गर्नुभयो।
प्रयोगशाला च्यानलहरू जाँच गर्नुहोस्:
अर्को चरण च्यानलहरू जाँच गर्न हो। च्यानल प्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईंले हामीले छलफल गरेका ३ प्यारामिटरहरू देख्नुहुनेछ। यदि तपाइँ च्यानलहरू हेर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, शीर्षमा विन्डोज विकल्प खोल्नुहोस् र प्रयोगशाला च्यानल चयन गर्नुहोस्।
त्यसपछि तपाइँ सबै3प्यारामिटरहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
प्रयोगशाला रंग स्थान को इतिहास:
यहाँ प्रयोगशाला रङ ठाउँको सानो पृष्ठभूमि छ।
सन् १९०० को दशकमा रिचर्ड हन्टरले ल्याब कलर स्पेसको आविष्कार गरे। रंगहरूमा साना भिन्नताहरू हटाउन र एकरूपता कायम राख्न यसको क्षमताको बावजुद, यसलाई मानकको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।
वर्षौं पछि CIE ले CIElab भनिने ल्याबको अद्यावधिक संस्करण प्रस्तुत गर्‍यो। यसलाई c-lab को रूपमा उच्चारण गरिन्छ तर यसलाई प्रयोगशाला पनि भनिन्छ वा L*A*B* पनि भनिन्छ।
CIElab इजाजतपत्र मुक्त र प्रतिलिपि अधिकार हो त्यसैले तपाइँ यसलाई कुनै पनि उपकरणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
छोटकरीमा, ल्याब कलर स्पेस विभिन्न सफ्टवेयरमा रङहरू परिमाण गर्ने प्रविधि हो। यसमा विशाल रङ विकल्पहरू छन् र प्रत्येक छाया निश्चित संख्यासँग निर्दिष्ट गरिएको छ। L,aरbल्याब रङ स्पेसका ३ प्यारामिटरहरू हुन्। L भनेको हल्कापन हो। A-अक्ष रातो देखि हरियो रbनीलो देखि पहेंलो हुन्छ।
प्रयोगशाला रङ स्पेसको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो उपकरण स्वतन्त्र छ। यसले मुद्रण प्रक्रियामा प्रत्येक रंग भिन्नतालाई हटाउँछ र तपाइँलाई सिङ्क्रोनाइज गरिएको डिजाइनको साथ छोड्छ।
← किन तपाईको ब्रान्डलाई विशेष रूपमा कस्टम प्रिन्टेड बक्सहरू चाहिन्छ
यो अझै प्रिन्ट विज्ञापन रोक्न समय आएको छैन →